एकै रात परिवारका तीन सदस्यको हत्या, कसरी भयो घटना ? – Everest Dainik – News from Nepal
एकै रात परिवारका तीन सदस्यको हत्या, कसरी भयो घटना ?
सप्तरी, साउन १६ । जिल्ला सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाअन्तर्गत पर्छ मुसहरनियाँ गाउँ, मुख्य बजार क्षेत्रबाट झन्डै ५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा । पक्की सडक नभए पनि सदरमुकाम क्षेत्रसँग सहज आवतजावत हुन सक्ने गाउँ हो यो । गत जेठ २६ गते राति यसै गाउँका सुरज भनिने सूर्यनारायण साह, उनकी पत्नी र पाँच वर्षीया छोरीको सामूहिक हत्या भयो ।
ट्याग्स: hatya, Rajbiraj nagarpalika, saptari